Tag: tilmaamaha tusmada | Martech Zone
12 Fikradood oo lagu kala soocayo Suuqgeynta Mawduucaaga
Axad, Nofeembar, 22, 2015 Sabti, Febraayo 13, 2021 Douglas Karr
Waan jeclahay xaqiiqda ah in akhristayaasheenna ay nala dhegaan inkasta oo aynaan si aad ah u abuurnayn abuurka. Hubinta iyo daabacaadda tan faahfaahinta sawir-gacmeedku waxay ka caawisaa inay ka soocnaato daabacaaddeena kuwa kale ee halkaa jooga - laakiin kama aanan sii dhaafin intaas. Barnaamijkeena wareysiga wareysiga taxanaha ah ee lala yeelanayo hogaamiyaasha suuq geynta waa hal dadaal. Sababta ugu badan ee aan ugu dheggan nahay nuxurka qoraalka kooban waa mid si hufan looga eego dhanka waxtarka. Waxaan haynaa tan mowduucyo ah